Xubintii Ciyaaraha: Liverpool waa Guulaysatey 3:0! (dhegayso) – Radio Daljir
Xubintii Ciyaaraha: Liverpool waa Guulaysatey 3:0! (dhegayso)
Oktoobar 29, 2017 2:31 b 0
Waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsana horyaalka Ingiriiska, kooxda liverpool ayaana u muuqata in ay ka baxday dhibaatadii baryihii danbe ka haysatay dhanka horyaalka kaddib guushii ugu danbeysay ee ay gaadhay.
Dhanka Spain, kulamo la ciyaaray kabacdi, kooxda Barcelona ayaa sii dheeraysay dhibcaha ay ku hoggaaminayso horyaalka kaddib guul muhiim ah oo ay ayana gaadhay. Kulamo kale ayaa la ciyaari doona oo ah isla horyaalka Spain.